Tsubasa+ Apk misintona maimaimpoana ho an'ny Android  | APKOLL
Tsubasa+ Apk misintona maimaimpoana ho an'ny Android 
Tia milalao baolina kitra ve ianao? Raha eny, eto izahay miaraka amin'ny iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra ho anao, izay fantatra amin'ny anarana hoe Tsubasa + Apk. Io no lalao Android farany indrindra, izay manolotra traikefa lalao baolina kitra tsara indrindra ho an'ny mpampiasa. Manolotra maody samihafa izy io, izay ahitana kilalao tena izy sy endri-javatra maro hafa.
Misy fampiharana lalao samihafa, izay tsy azon'ny mpampiasa atao afa-tsy amin'ny fitaovana manokana. Noho izany, ny PS4 dia manohana ny sasany amin'ireo lalao tsara indrindra miaraka amin'ny sary tsara indrindra, ny fanaraha-maso, ny tantara ary ny antony hafa. Betsaka ny mpampiasa Android raha oharina amin'ny PS4.
Ny mpilalao dia tia milalao karazana lalao mihetsika ary koa baolina kitra. Noho izany, ny Tsubasa dia kilalao misy endri-javatra maro, izay ahitana baolina kitra, hetsika, fitantarana tantara, Multiplayer, sy ny maro hafa. Noho izany, misy mpilalao an-tapitrisany izay tia milalao ity lalao ity.
Te hilalao izany amin'ny fitaovana Android anao ve ianao ary te hahafantatra azy rehetra momba izany? Raha eny, dia eto ho anao rehetra izahay. Izahay dia hizara amin'ny antsipiriany ny momba an'ity fampiharana ity, izay hananan'ny mpampiasa hevitra momba azy io ary afaka milalao mora foana ianao nefa tsy misy karazana olana. Noho izany, andao hanomboka hizaha ity fampiharana ity.
Topimaso momba an'i Tsubasa + Apk
Fampiharana kilalao Android izy io, izay manome traikefa tsara indrindra amin'ny lalao baolina kitra araka ny tantara an-tsary. Izy io dia kilalao mifototra amin'ny tantara an-tsary, izay manolotra ny mpilalao fototra Tsubasa, izay manana hery lehibe ary mpilalao baolina kitra ihany koa. Noho izany, te-hiditra amin'ny toetrany? Fantatro fa tianao izany.
Noho izany, manolotra maodely marobe izy io, izay ahafahan'ny mpampiasa milalao ivelan'ny Internet. Ao amin'ny maody ivelan'ny seranana, afaka mamita mora foana ny maody tantara ireo mpampiasa, izay mitovy amin'ny tantara an-tsary. Ny mpilalao dia tokony hampiakatra ny fomba filalaovana lalao, izay misy ny fitantanana ekipa, mamoaka fahaiza-manao manokana an'ny mpilalao, mamita dingana manokana, mamita ny tantara.
Misy ihany koa ny fomba an-tserasera azo alaina, izay ahafahan'ny mpampiasa milalao azy miaraka amin'ireo mpilalao an-tserasera hafa. Ny mpampiasa dia afaka milalao an-tserasera miaraka amin'ny mpilalao efatra amin'ny fomba hafa. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra dia ny fiofanana, izay ahafahan'ny mpilalao mahazo fifehezana feno amin'ny endri-tsoratra.
Misy tarehin-tsoratra samihafa azo jerena amin'ity lalao ity. Azonao atao ny manamboatra ekipa mampiasa tarehin-tsoratra. Fa tsarovy foana ny endri-tsoratra samy hafa manana hery samy hafa, izay afaka manatsara mora foana. Noho izany, vonona ny handinika izany rehetra izany ary afaka milalao izany mihitsy aza isika.
Ekipa maro no hita ao amin'ny tantara avy amin'ny firenena samihafa ary ny mpilalao avy amin'ny ekipa samihafa dia manana ny sasany amin'ireo hery tsara indrindra. Mety manana olana ianao amin'ny fanaovana isa amin'ny sasany amin'ireo tsara indrindra. Noho izany, manana fiofanana tsara indrindra ary manomboka milalao ity lalao ity.
Misy fomba sy endri-javatra hafa azo alaina, saingy azonao atao ny mijery azy rehetra. Noho izany, andeha hojerentsika fohy ny rafitra fanaraha-maso. Ny controllers dia mitovy amin'ny PS4 controller, izay sarotra ho an'ireo izay tsy mbola nilalao na inona na inona mampiasa controller. Noho izany, raha manana traikefa amin'ny mpanara-maso ianao dia afaka mahafantatra mora foana ny momba azy ireo.
Manolotra sary avo lenta izy io, izay manome traikefa amin'ny fotoana tena izy. Ny kianja samihafa dia manolotra ny manome karazana tontolo samihafa, izay ahafahan'ny mpampiasa miaina ny fiovana amin'ny lalao tsirairay lalaoviny. Mila alalana avy aminao ny fandraisana mpilalao samihafa.
Ny mpandray anjara tsirairay dia manana tantara hotantaraina, afaka maheno ny tantara iray manontolo momba ilay mpilalao ianao ary manapa-kevitra fa tadiavinao ao amin'ny ekipa izany na tsia. Noho izany, misy endri-javatra an-taonina amin'ity lalao ity, azonao zahana. Sintomy ny Tsubasa + App ary manomboka milalao ny lalao tsara indrindra hatrizay.
anarana Tsubasa +
Anaran'ny fonosana jp.miraire.tsubasaplus
Gameplay amin'ny Multi-Player
Hatsarao ny fahaizan'ny mpilalao
Tantano ny ekipa
Ny fampiharana lalao baolina kitra mitovy amin'izany aminao.
Ahoana ny fampidinana ny Tsubasa + Ho an'ny Android?
Raha te hampidina ny rakitra Apk amin'ity lalao ity ianao dia tsy mila mitsidika toerana hafa. Hizara rohy azo antoka sy miasa amin'ity rindranasa ity izahay. Mila mahita fotsiny ianao ary tsindrio ny bokotra fampidinana, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity.
Raiso ny traikefa tsara indrindra amin'ny lalao amin'ny Tsubasa + Apk ary mankafiza ny fotoana malalaka. Milalaova amin'ny mpilalao marobe na milalao tsy misy karazana internet. Manana fanaraha-maso feno amin'ny fahaiza-manao rehetra an'ny mpilalao ary ho ekipa voalohany. Jereo eto ny tontolon'ny soccer vaovao. Sintomy avy amin'ny bokotra azo jerena etsy ambany ary manomboka mankafy azy io.
Sokajy Games, Sports Tags Tsubasa + Apk, Tsubasa + App, Tsubasa + Ho an'ny Android Post Fikarohana
Fampidinana iFectivo Apk Ho an'ny Android [Fampindram-bola eo noho eo]
MMR Booster ML Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]